Home News XOG:yaasoo agaasimay Weerarkii Hoteel SYL lagu qaaday
Ayada oo Xalay laweerary Madaxyooda Afaafkeeda hore ayaa hadana waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan weerarkii Xalay dhacay oo SYL Hoteel lagu qaaday.
Xildhibaanka Mahad Salaad oo katirsan Golaha Shacabka Soomaalia ayaa waxa uu war kasoo saaray Weerarkii xalay eedayn kululu ayuu u jeediyay Dowlada Soomaalia waxa uuna sheegay in lasoo agaasimay Weerarkii Xalay dhacay.
Khasaare baxad le ayuu sheegay in uu jira waxa uu beeniyay hadalkii Dowlada ee ahaa in khasaaruhu uu yaryahay waxa uuna xusay in Isbitaalada Magaalada ay buuxaan.
;Warsaxaafadeed ay soo saareen Ciidanka Boliiska Somaaliyeed ayaa lagu sheegay in weerarkii xalay maleeshiyaadka Alshabaab ku qaadeen Hotel SYL ay ku dhinteen 3 qof shacab ah iyo 2 askari. Sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 11 qofood.